Danjire Kay oo ka Digay khatarta Al-shabaab Marka la gaaro doorashada 2016-ka – Radio Daljir
Maajo 20, 2015 4:46 b 0
Arbaco, May 20, 2015 (Daljir) — Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Danjire Nicholas Kay ayaa warbixin uu siiyay golaha amaanka ee Qaramada Midoobay kaga hadlay xaalada guud ee dalka Soomaaliya, dagaalka ka dhanka Alshabaab, imaanshaha qaxootiga Yemen ee Soomaaliya iyo qorshaha doorasho Soomaaliya ay kaga dhaceyso sanadka 2016.
Nicholas Kay, ayaa sheegay in warbixintii uu bixiyay bishii February ee sanadkaan uu kaga hadlay walaaca laga qabay xaalada dalka Soomaaliya, laakiin wuxuu hadda sheegay in bilihii lasoo dhaafay lagaaray guulo la taaban karo.
Dunida ayuu ugu baaqay ineysan dayicin fursada dalka Soomaaliya, isagoo cadeeyay in loo baahan yahay in la kordhiyo taageerada iyo fa’ideysiga dhaqaalaha imaanaya bilaha soo socda.
Mr. Kay wuxuu sheegay in dagaalo badan oo dhanka siyaasada laga sameeyay dalka, isagoo sheegay inuu la shaqeynayo dowlada Federaalka, gobolada iyo hogaamiyaasha gobolka, baarlamaanada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sidii loo dhisi lahaa qaran ku yimaada wada hadal iyo dib u hishiisiin.
Sidoo kale wuxuu sheegay in masuuliyiin sar sare ay u midoobeen in la gaaro qorshaha sanadka 2016 oo ah in doorasho ay ka dhacdo dalka Soomaaliya iyo bartilmaameydyada kale ee dowlada Soomaaliya.
Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegay in dalka Soomaaliya ay yimaadeen qaxootigii ugu badnaa ee kasoo carara dagaalada ka taagan dalka Yemen isagoo sheegay ku dhawaad 7,000 oo qaxooti ah ay kasoo laabteen dalka Yemen.
Ugu dambeyn wuxuu ka hadlay dagaalka lagula jiro Alshabaab, isagoo sheegay in dagaaladaasi laga gaaray guulo badan, laakiin wali ay taagan tahay weerarada Alshabaab ay ka geysan karaan dalka Soomaaliya